Ny henan-kisoa no iray amin'ireo vokatra tsara indrindra amin'ny hena, izay, koa, no mpamatsy proteinina ho an'ny vatantsika. Ankoatr'izany, ny hena vita amin'ny kisoa dia haingana dia haingana ary mora ny manomana azy. Eny, inona no mety ho mafafotra kokoa noho ny voankazo kekazo feno salady miaraka amin'ny legioma vaovao ho an'ny sakafo hariva?
Ahoana ny fomba hanamboarana menaka avy amin'ny kisoa?
Alohan'ny hanombohanao manamboatra kobam-bary, mila mamaritra ny fitsipika fototra ianao: Tokony ho menaka ao anaty fantsom-boaloboka mahamay. Tokony ho ampy ny menaka, raha tsy izany dia hivoaka ny jirofo, ary hikorontana sy maina ny akoranao. Raha ny fanontaniana, ny fihinanana henan-kisoa betsaka dia ny fotoana tsara indrindra ho an'ny fanala dia 7 minitra eo amin'ny lafiny tsirairay.
Poti-kisoa miaraka amin'ny voatabia
Paprika - 1 tbsp. sotro;
dipoavatra, sira - manandrana.
Mihinam-pako 1.5 kilaometatra ny henan-kisoa, avy eo mamono miaraka amin'ny mato. Asio diloilo eo amin'ny savony ary avelao izy hamafana, ary apetaho ny kofehy. Afangaro amin'ny lafiny tsirairay mandritra ny 7-8 minitra, tsy manadino sira sy dipoavatra. Esory ireo tongolobe sy voatabia amin'ny faribolana. Hetezo ny kavina amin'ny sisiny, ary ampio ny toasta sy voatabiha manaraka. Ampio paprika, sira, dipoavatra ary hanambatra ny zava-drehetra. Mofomamy 15 minitra eo ho eo. Apetraho eo ambonin 'ny takelaka ny kofehy, ary ny topy misy saosy avy amin' ny voatabiha.
Sakafo vita amin'ny poti-tsaka
Azo inoana fa efa henonao ny momba ny fihinanana voankazo amin'ny teny Frantsay mihoatra ny indray mandeha. Tsy isalasalana fa tsara tarehy izy io ary atolotra avy hatrany ny fomba mahafa-po indrindra amin'ny zavatra tsy azo avela. Raha ny marina dia fomba fikarakarana ho an'ny kobam-kisoa izy io, izay amidy amina tsaramaso. Afaka mahagaga anao koa ireo namanao sy ny havanao amin'ny fanomanana ity sakafo matsiro ity.
piso mainty, sira - manandrana;
Misasà hena, maina ary tapaho amin'ny ampahany mitovy. Afatory amin'ny lakozia amin'ny lakozia. Ny sira tsirairay sira miaraka amin'ny sira sy dipoavatra, avy eo dia mofomamy ao anaty vilany mandra-bolamena volomparasy. Ny karaoty dia miondrika eo amin'ny lava-paty kely ary misy tongolobe mofomamy misy tongolobe. Atsipazo ny entona amorom-paty ary atsipazo ny tsimoka. Apetraho eo amin'ny tavoahangy ny kobam-bary ary apetaho amin'ny karaoty sy tongolobe, voatabiha ary fofona manitra. Mialao ao amin'ny oven mandritra ny 20 minitra amin'ny hafanana 180 degre. Alohan'ny hanompoana dia afaka manipy ilay lovia amin'ny dill.
Mihinàna holatra miaraka amin'ny holatra
pork - 4 boribory kofehy;
mavo - 30 g;
sotro akoho - 1/2 st .;
divay mena - 1/3 amin'ny taonjato iray;
tsiranoka - 1 teaspoon;
Afangaro ny kôketa misy poizina miaraka amin'ny sira sy ny sira. Afo ny kisoa amin'ny menaka oliva mandra-bolamena volomparasy. Ario avy eo, fa ny hena dia tsy mafana. Ao anatin'io pena io, ampio tongolo zato, tongolo sy holatra miaraka amin'ny lobules. Afangaro amin'ny hafanana midadasika mandritra ny 8-10 minitra. Ampio biriky sy divay izy avy eo. Mofomamy mandritra ny 5-7 minitra. Manidina ao anaty 1 teaspoon ny rano ny starch ary ampio ny saosy holatra, mampihetsi-po foana. Mofomamy mandritra ny 5 minitra hafa, avy eo ny saosy manondraka ny kisoa. Rehefa manompo ianao, dia afaka manipy volomparasy.
Sakafo ho an'ny sipresa avy amin'ny kisoa. Ary isaky ny mamy. Mila ny eritreritra kely fotsiny ianao ary afaka mamorona ny sangan'asanao manokana. Ary iza no mahalala, mety ho izany no fomba famokarana kisoa ho lasa sakafo ara-pianakaviana ary halefa any amin'ny taranaka fara mandimby.
Sakafo tsy misy mofo
Tortlets misy trondro mena
Sprat amin'ny voatabia ao an-trano
Eggplant amin'ny atody
Ahoana no handrahoana ny hena?
Salady "Chicken ryaba"
Hiantsena any Bolgaria
Noho ny fitsaboana mangatsiaka amin'ny fitondrana vohoka (fahatelo fahatelo)?
Biby miaraka amin'ny zanak'ondry
Ahoana ny amin'ny fararano amin'ny famindrana raozy mankany amin'ny toerana vaovao?
Ny labozia miaraka amin'ny papaverina ao amin'ny fitondrana vohoka
Ny okroshka klasika misy saosisy amin'ny kvass - recipe
Ny tongolo lay
Green radish - tsara sy ratsy
Ho an'ny mpifankatia
Mpivaro-adala efatra mitaiza mialoha sy aorian'ny fametavahana
Ny fitsaboana ny hemorrhoids ivelany amin'ny vehivavy
Hiantsena any Aotrisy